Ukuphakama koMculo kwiMinyaka ephakathi
Indlela iBandla, iThabadors kunye nabaBumbisi abachaphazela ngayo uMculo kwi-14th Century
Umculo oyingcwele wawunqotshwa ngumculo wehlabathi ngekhulu le-14 leminyaka. Olu hlobo lomculo lwaluhluke kumculo oyingcwele kuba lujongene neengqungquthela ezazingekho ngokomoya, ezithetha ukungabikho zonqulo. Abaculi ngeli xesha bajongwa ngamafomu avulekileyo. Umculo womculo waqhubeka wada wada wada wada wafika emva kwekhulu le-15, emva koko, umculo wengoma .
Ngexesha leMinyaka Ephakathi , iBandla laliyintloko kunye nomvelisi womculo.
Ubungakanani umculo obhalwe phantsi kwaye ulondolozwe njengemibhalo yesandla ibhalwe ngabafundisi beecawa. Ibandla likhuthaza umculo oyingcwele njengengoma ye-plainsong, i-Gregorian song, kunye neengoma zecawa.
Izixhobo zeMinyaka Ephakathi
Ngenxa yokuba umculo ubonwe njengesipho esivela kuThixo, ukwenza umculo kwakuyindlela yokudumisa izulu ngenxa yesipho. Ukuba ubheka imizobo ngeli xesha, uya kubona ukuba rhoqo, iingelosi zibonakaliswa njengeendidi ezahlukeneyo zezixhobo. Ezinye zezixhobo ezisetyenzisiweyo ziyi-lute, shawm, icilongo , nehadi .
I-Music Music kwiMinyaka Ephakathi
Ngelixa iSonto lizama ukunqanda naluphi na uhlobo lomculo olungcwele, umculo welizwe wawusaphila ngexesha leMinyaka ephakathi. I-Troubadours, okanye abaculi abahambahambayo, basasaza umculo phakathi kwabantu ukususela ngekhulu le-11. Umculo wabo ngokuqhelekileyo wawuneengoma zomculo kunye namazwi amaninzi ngokuphathelele uthando, uvuyo kunye nentlungu.
Ngethuba lokunyuka komculo weli xesha kwi-14th-century, omnye wabaqambi abaluleke kakhulu belo xesha nguGuillaume de Mauchaut.
UMauchaut wabhala umculo ongcwele kunye nomhlaba, kwaye uyaziwa ngokuqulunqa iipolphoni.
Omnye umqambi obalulekileyo nguFrancesco Landini, umqambi waseNtaliyane oyimpumputhe. Landini wabhala amadrigals, oluhlobo lomculo ovakalayo olusekelwe kwimibongo yehlabathi ekwa kumculo owawunomculo olula.
UJohn Dunstable wayengumqambi obalulekileyo waseNgilani owasebenzisa ixesha eli-3 nelesithupha kwisithuba se-4 ne-5 esetyenziswe ngaphambili.
UDunstable wathonya abaninzi abaqambi bexesha lakhe kuquka uGilles Binchois noGuillaume Dufay.
UBhinchois noDufay babesaziwa ngabomculo beBurgundi. Imisebenzi yabo ibonakalisa ukuthoba. I-Tonality ngumgaqo wokuveliswa komculo apho ekupheleni kwesiqwengqo kukho ukuvakalelwa kokugqitywa ngokubuyela kwi tonic. I-tonic yimiba enqununu yokubunjwa.
Imbali yeCandelo loMculo kuma-1990
3 Imbali yokunyuka kweeMbali kwiNose